Google Maps ကို - Navigation & Transit | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » ဂျီပီအက်စ် & ခရီးသွား Apps ကပ » Google Maps ကို - Navigation & Transit
Google Maps ကို - Navigation & Transit APK ကို
တစ်နေရာရာမှာ Going? မြေပုံများ, သငျသညျကို real-time ဂျီပီအက်စ်အညွှန်း, အသွားအလာ, အကူးအပြောင်းနှင့်ထိုကဲ့သို့သောပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများနှင့်လူကြိုက်များကြိမ်အဖြစ်သောအရပ်တို့ကိုမသန်းပေါင်းများစွာအကြောင်းအသေးစိတ်များအတွက်အပေါ်အားကိုးနိုင်ပါတယ်တရားဝင် App ကိုအတူသွားပါ။
Real-time updates များကိုအတူရှိပိုမြန် Get
Real-time အညွှန်း, ETAs နှင့်အသွားအလာအခြေအနေများနှင့်အတူယာဉ်အသွားအလာ Beat
Real-time အကူးအပြောင်းအင်ဖိုနှင့်သင်၏ဘတ်စ်ကား, ရထား, သို့မဟုတ်စီးနင်း-ဝေစုကိုဖမ်း
တိုက်ရိုက်လွှအသွားအလာ, လမ်းပိတ်ပစ်ခြင်းနှင့်ယာဉ်ကြောအဖြစ်အပျက်များအပေါ်အခြေခံပြီးအလိုအလျောက်ပြန်လည်လမ်းကြောင်းနှင့်အတူအချိန် Save
လမ်းသွားလမ်းညွှန်မှုနှင့်အတူ navigation သင်တစ်ဦးအလှည့်သို့မဟုတ်ထွက်ပေါက်လက်လွတ်မဒါ
အစားအစာများနှင့်အတွင်းပိုင်း၏သုံးသပ်ချက်များ, ratings နှင့်ဓာတ်ပုံများကိုနှင့်အတူလိုက်ရန်အကောင်းဆုံးသောအရပ်တို့၌သင်သည်ဆုံးဖြတ်
သင့်ရဲ့ခရီးစဉ်ကိုစီစဉ်ခြင်းနှင့် menus တွေတွေ့မြင်, သံသယဖြစ်စေလျက်, နှင့်နေရာများပုံမှန်အားဖြင့်အလုပ်အများဆုံးဖြစ်သည့်အခါရှာတွေ့
သငျသညျခငျြသို့မဟုတ်မကြာခဏသွားရောက်ကြည့်ရှုသောအရပ်တို့ကိုမ Save, အလျင်အမြန်နောက်ပိုင်းတွင်မည်သည့်ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်ကိရိယာမှသူတို့ကိုရှာတွေ့
ကို Google Maps ကိုခြားနားချက်ကိုတွေ့ကြုံခံစား
Street View နှင့်စားသောက်ဆိုင်များများအတွက်မိုးလုံလေလုံပုံရိပ်, စျေးဆိုင်, ပြတိုက်နှင့်ပိုပြီး
220 နိုင်ငံများနှင့်နယ်မြေများတွင်ဘက်စုံ, တိကျမှန်ကန်သောမြေပုံများအား
သန်း 100 ကျော်သောအရပ်တို့ကိုမအပေါ်အသေးစိတ်စီးပွားရေးအချက်အလက်
နိုင်ငံအားလုံးအတွက် * အချို့အင်္ဂါရပ်ကိုမရရှိနိုင်
•စကားသံကိုအညွှန်း Goo.gl/bDMK6P Improve
http://goo.gl/vLUcaJ: တစ် beta ကို tester ဖြစ်လာ
Maps ကို - Navigation & Transit
52.17 ကို MB
SEKH SABIRUL Ali says:
ဒီဇင်ဘာလတွင် 7, 2017 မှာ 9: 52 ညနေ
verry ကောင်းတဲ့ငါ့အကိုမြေပုံ apk
သြဂုတ်လ 4, 2017 မှာ 6: 47 နံနက်
ဤသည် apps အလွန် usefullall လူတွေကျေးဇူးပြုပြီးဒေါင်းလုတ်လုပ်ဖြစ်ပါတယ်
prafulla karne says:
မေလ 30, 2016 မှာ 1: 04 ညနေ
အထောကျအကူ apps များ
Bhoopendra kushwah says:
ဒီဇင်ဘာလတွင် 9, 2015 မှာ 8: 50 ညနေ
ဧပြီလ 1, 2015 မှာ 11: 56 နံနက်
အလွန်အသုံးဝင်သော app ကို။ Download ပြုလုပ် ... ..
မတ်လ 24, 2015 မှာ 12: 10 ညနေ
ဒါကြောင့် BlueStacks အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုပါကတစ်စုံတစ်ဦးကငါ့ကိုပြောပြနိုင်မလား?
မတ်လ 15, 2015 မှာ 7: 03 ညနေ
အလွန်အသုံးဝင်သောကို web site ကို
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 12, 2015 မှာ 9: 20 ညနေ
ဤမြေပုံကိုအလွန် App ဖြစ်ပါတယ် ... .very ပိုမြန် :-)
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 11, 2015 မှာ 12: 52 ညနေ
Gooood အားလုံး Apps ကပ
အောက်တိုဘာလ 7, 2014 မှာ 9: 17 ညနေ
ကိုယ်ကဒီအကြှနျုပျ၏ Bb အပေါ်မြေပုံများကိုထည့်သွင်းဖို့ကြိုးစားနေပါ၏အခါမသာငါ့အလက်ရှိတည်နေရာမှ access ကိုလိုအပ်သော်လည်းငါ့ contancts, ဓါတ်ပုံတွေကိုနှစ်ဦးစလုံး device ကိုပေါ်, cout စတာတွေကြောင့်အလုပ်မလုပ်သင့်တယ်ဘယ်လိုသို့မဟုတ်န်းကျင်ကတခြားလမ်းလည်းမရှိ
စက်တင်ဘာလ 15, 2014 မှာ 2: 56 နံနက်
အစဉ်အဆက်5ကြယ်ပွင့် app တစ်ခု
သြဂုတ်လ 24, 2014 မှာ 9: 47 နံနက်
google မြေပုံ !!!!!!!!! ဒေါင်းလုတ်လုပ်ကောင်းရဲ့
သြဂုတ်လ 14, 2014 မှာ 11: 50 ညနေ
ဇူလိုင်လ 29, 2014 မှာ 2: 59 ညနေ
ဒီ apk ဖိုင်ကို Nokia X စီးရီးများပေါ်တွင် install ဘယ်သို့ရနိုင်သနည်း
LAN ကို Garcia says:
ဇူလိုင်လ 1, 2014 မှာ 3: 33 ညနေ
ကိုယ်ကဒီ app ကိုချစ်ကြတယ်။
ဇွန်လ 7, 2014 မှာ 5: 06 ညနေ
ဇန်နဝါရီလ 20, 2014 မှာ 2: 55 ညနေ
ကောင်းသော Apps ကပ
စက်တင်ဘာလ 8, 2013 မှာ 9: 50 ညနေ